८९ यात्रु सवार विमानको चक्काले काम गरेन, रनवेमा घिसारेर पाइलटले गराए अवतरण – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/८९ यात्रु सवार विमानको चक्काले काम गरेन, रनवेमा घिसारेर पाइलटले गराए अवतरण
८९ यात्रु सवार विमानको चक्काले काम गरेन, रनवेमा घिसारेर पाइलटले गराए अवतरण
म्यानमार– म्यानमारमा अगाडिको चक्का विना नै पाइलटले सावधानीपूर्वक विमान अवतरण गरेका छन् । म्यानमारको माण्डलेमा रहेको विमानस्थलमा मुलुकको राष्ट्रिय वायुसेवाको विमान अवतरण गर्ने क्रममा अगाडिको चक्काले काम नगरेपछि त्यत्तिकै अवतरण गरिएको हो ।
अवतरण गरिएको एम्बारर १९० विमानभित्र ८९ यात्री रहेको जनाइएको छ । शुरुमा विमान अवतरण गर्ने क्रममा विमान चालक कप्तान म्याट मो ओउङले विमानको अगाडिको चक्काले काम गरे नगरेको निश्चित गर्न विमानस्थलको आकाशमा दुई फन्को लगाएका थिए । तर, विमानको अगाडिको चक्काले काम नगरेपछि जबरजस्ती अवतरण गर्नु परेको थियो । आपतकालीन अवतरण गर्ने क्रममा शुरुमा इन्धनका कारण विमानको वजन कम होस् भन्नाका लागि आकाशमा केही बेर विमान उडाइएको थियो ।
त्यसपछि विमानचालकले निकै होसियारीपूर्वक अवतरण गराउँदा पछाडिका चक्काले जमिनमा छोएको थियो भने पछि अघिल्लो भाग धावनमार्गमा २५ सेकेण्डसम्म घिसारिएको थियो । राजधानी यंगुनबाट माण्डलेका लागि उडेको विमानमा सवार सबै यात्री सुरक्षित रहेको जनाइएको छ ।
सुनको विमानमा उड्ने मलेसियाली राजाकी राजकुमारीले गरिन् कामदारसँग विवाह !
चीनका शीर्ष सैन्य अधिकारीले दिए ताइवानमाथि आ’क्रम’णको यस्तो ध’म्की, विश्वभर ह’लच’ल !
कोरोनाका कारण ८ बर्षीय बालिकाको मृत्यु